IHuaian District Science and Technology Bureau yeza enkampanini yethu ukuzoqondisa umsebenzi
UJeremy Guan, umphathi jikelele we-Huaian ASN technology technology CO., LTD unikeze abaholi be-Huai'an District Technology Bureau abafanelekile abeza enkampanini yethu ukuphenya nokucwaninga ngemfudumalo ngomhlaka-26 Agasti. Abaholi abafanele be-Technology Bureau balalela ...
Iteyipu yokusakaza yakhiwa izingqimba eziningi ze-fiberglass ekhethekile efakwe i-resin.
1.Ukuqina okuphezulu nesisindo esincane: Ubulukhuni bensimbi ngemuva kokuphulukiswa kuphindwe ka-20 kokhonkolo wendabuko. Lesi sici siqinisekisa ukulungiswa okuzinzile nokuqinile ngemuva kokusetha kabusha okulungile. Izinto zokulungiselela zincane futhi isisindo silula, silingana no-1/5 wesisindo ...
Ungayisebenzisa kanjani i-Orthopedic Casting tape
1. Lungisa ingxenye elimele bese uyisonga ngokhuni oluvunwayo; 2. Vula isikhwama sokupakisha seteyipu yokusakaza bese ucwilisa ibhandishi emanzini ekamelweni lokushisa elingu-20 ℃ ~ 25 ℃ cishe imizuzwana emi-4 ~ 8; 3. aphoqelelwe ukukhipha amanzi, umqulu owodwa kufanele usetshenziselwe ukuqaqa omunye umqulu ...